Keyboard | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
iOS 8.1.3 နှင့် iOS 8.2 တို့ဟာ လတ်တလော ချိန်ထိ Jailbreak မရှိသေးတဲ့ အတွက် မြန်မာစာကို နေရာ တိုင်းမှာ မမြင်ရ ဟု ပြောနေ ကြသူများ အတွက်
မြန်မာစာ ကို နေရာတိုင်းမှာ ရရှိအောင် ပြုလုပ်နည်းကို တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ် ...
Non-Jailbreak အတွက် Mobile Configuration Font များစွာ ရှိသော်လည်း အများ စုမှာ Safari Browser မှာ မြင်ရခြင်း မရှိသေး ပါဘူး.. အခြားသော Apps များ မှာတော့ မြင်ရ ပါတယ် ..
၁. App Store သို့ ၀င်ပါ ...
၂. Search မှ Sar Lone Keyboard ဟူ၍ ရေးထည့်ကာ Install လုပ်ပါ... (သို့မဟုတ် အောက်တွင် ပေးထားသော Link မှ တဆင့် App Store မှာ သွားရောက် ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်)
၃. Install လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ Sar Lone Keyboard App ကို ဖွင့်ပါ... စဖွင့် လိုက်သည်နှင့် Font ကို Download လုပ်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်... လုပ်ပေး လိုက်ပါ။
၄. ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း Profile တစ်ခုကို Install လုပ်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်... Install နှိပ်ပေး လိုက်ပါ ..
၅. Profile ဟာ Unverified Profile ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် Warning Message တခု ထပ်တက် လာပါ လိမ့်မယ်... ကိစ္စ မရှိပါဘူး .. Install သာ နှိပ်ပေးပါ..
၆. Install နှိပ် ပြီးရင် Device မှာ Lockscreen Passcode ချထား ပါက အဆိုပါ Passcode ကို မေးလာမည် ဖြစ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်.. အကယ်၍ မချ ထားပါက ထည့် စရာ မလိုပါ။
၇. ဒါဆိုရင်တော့ Zawgyi Profile လုပ်ပေးပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. Done ကိုနှိပ်ပါ...
အခု ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Non-jailbreak iDevice ရဲ့ Mail App မှလွဲ၍ နေရာ တိုင်းမှာ မြန်မာစာကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါပေမယ့် Mobile Safari မှာတော့ မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေနဲ့ မမြင်ရသေး ပါဘူး... ဒါ့ကြောင့် ဆက်လက် ဖတ်ရှု ကြပါကုန်...
Safari ကို ဖွင့်လိုက်ပါ.. ထို့နောက် ပုံတွင် ပြထားသည့် အတိုင်း Share Button ကို နှိပ်ပါ
ထို့နောက် Extension မှ More ကို ရွေးပါ
More ကိုရွေးပြီးလျှင် Zawgyi Force ကို ဖွင့်ပေး ထားလိုက်ပါ.. (ပုံမှာတော့ ပိတ်ထား ပါသေးသည်)
Zawgyi Force ကို ဖွင့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Safari Extension မှာ Zawgyi Force ကို မြင်တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ် ...
သင်ဟာ မြန်မာစာကို အခု ဆိုရင် Safari မှာပါ မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်.... မြန်မာWeb page တခုခု ၀င်တာနဲ့ မြန်မာစာ နေရာမှာ လေးထောင့် အတုံး (သို့မဟုတ်) ကြက်ခြေခတ် ပုံများ ဖြစ်နေ ခဲ့ရင် Share Button ကိုနှိပ်ပြီး... Extension မှ Zawgyi Force ကို တစ်ချက်နှိပ် ပေးလိုက်သော အခါမှာတော့ အဆိုပါ သင် ဖွင့်ထား တဲ့ Web Page မှာ မြန်မာလို ဖတ်ရှု နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်...
အခု ဆက်ပြီးတော့ မြန်မာ ဇော်ဂျီ အလှ Font ကို Install လုပ်ဖို့ တင်ပြပေး ပါမယ်.. ဒါမှသာ နေရာတိုင်း နေရာတိုင်း မှာ အဆင် ပြေပြေနဲ့ မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင် ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ကို လှပစွာ ဖတ်နိုင်မှာပါ။
~ အောက်တွင် ပေးထားသော အလှ Font ၂ ခုမှ တစ်ခုကို Mobile Safari မှ ဖွင့်ကာ Direct Download လုပ်ရုံနဲ့ Profile ကို Install လုပ် ခိုင်းပါမယ်... လုပ်ပေး လိုက်ပါ... ပြီးလျှင် Device ကို Reboot ချပါ...
ဒါဆို အဆင်ပြေ သွား ပါလိမ့်မယ်...
▼ Beautiful Zawgyi Font 1 ▼ OR ▼ Beautiful Zawgyi Font2▼
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, Keyboard, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
Keyman Developer 8.0.335.0 | 24.19 MB
Create Custom Keyboards Layouts For Any Language – Keyman Developer 8 is the most powerful tool for creating Windows and Web keyboards in any language.
Keyman Developer 8 adds features and functionality, behind the scenes and in front of the camera. We’ve greatly enhanced the Keyman character map, improved Unicode support above the BMP and integrated the KeymanWeb module for everyone. Plus, you can now build keyboards with multiple end-user options.
Nexy Keyboard v1.0 for Android
မြန်မာစာ ရိုက်ရမှာ ပျင်းတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေ စေမယ့် Nexy အမည်ရ Android ကီး
ဘုတ်လေး တစ်ခု ထပ်မံ ထွက်ရှိ လာပါတယ်။
မြန်မာ အသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်လိုက် တာနဲ့ မြန်မာစာနဲ့ ပေါ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ မြန်မာစာ တစ်
လုံးချင်း မရိုက်ချင် သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေ ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရိုက်နေကျ Myanglish နဲ့
ဒီ Keyboard လေးကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာယူနီကုဒ် ၊ ဇော်ဂျီ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သုံးမျိုး ရိုက်နိုင်ပါတယ် ။
Nexy Keyboard ကို အသုံးပြုဖို့ ဖုန်းဟာ Android version 4.0 နှင့် အထက်ဖြစ် ရပါမယ်။ ဒီ Key
board လေးကိုတော့ Nex အဖွဲ့မှ ရေးသားထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Nexy Keyboard for Android ကိုအောက်က Link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
▼ my.pcloud.com ▼ OR ▼ play.google.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Wednesday, December 24, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Keyboard, Phone Application, မြန်မာကီးဘုတ်
Cyber2day.com by Star@2050
Pitrinec Perfect Keyboard Professional 7.6.6 | 24.17 MB
– Three-pane UI (macro groups tree -> macros list -> macro editor)
– All macros in single file, “File/Open”, “File/Save as” supported
– Macro file simple encryption to protect content
– Macro file AES strong encryption to protect content
– Add wizard
– Enable/Disable the tool
– Lock program UI to protect macros from being changed
– Ability to disable macros and macro groups
– Generate “Free Macro Player” file that can others freely use
– Application specific triggers – the same trigger can start different macros in different applications
– Text shortcut trigger
– Extended hot-keys
– Macro hint & complete as typing
– Password protect macros to prevent running/changing/viewing them by unauthorized users
– Share macros withinauser group
– Export/import macros from/to text file
– Simple visual macro editing with support for macro debugging
– Basic macro commands (insert time/date, paste text, send keystrokes, mouse events, basic file/folder operations, activate window, open web page, wait, “if window”, run executables, show message, etc. )
– 150+ additional commands (variables, time/date manipulation, macro flow commands if/then/else, cycles, procedures, run other macros, run context menus commands, find image on screen, user control over error handling, user defined forms, send e-mails, FTP, manipulate windows, manipulate clipboard, read/write from/to Windows registry, enumerate and kill processes, and more…)
– Additional professional commands (call macros remotely, file/directory AES encryption)
– VBA-compatible macro language + VBA IDE + syntax highlighting + dialog editor + debugger
OS : Windows 8, Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, 2000 (64 bit or 32 bit).
From : Pitrinec Perfect Keyboard Professional 7.6.6
ကဏ္ဍ Keyboard, Tools, Window
Android ဖုန်းတွေ အတွက် ရောင်စုံ Frozen Keyboard
Android ဖုန်းတွေ အတွက် ရောင်စုံ ကီးဘုတ်လေးပါ ... မရိုးအောင် ပြောင်းသုံး ချင်သူများ အတွက်ပါ
အသုံးပြုလို သူများ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက် ပါ။
မှတ်ချက်။။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ frozen keyboard ကို ဖြုတ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ တစ်ခုတင်တိုင်း တစ်ခုဖြုတ်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, July 08, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Keyboard, Phone Application
TypingMaster Pro 7.10 Build 808 Final With Serial Full Version
ဒီကောင်လေး ကတော့ computer အခြေခံ စတက်တဲ့ သူတွေ အတွက် အထူးအရေး ပါသလို လက်ကွက်
အဆင်မပြေတဲ့ သူတို့ အတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး တစ်ခုပေ့ါဗျာ။
မိမိ computer နှင့် လက်ကွက်လေ့ကျင့်ချင် သူတို့ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
Full ဖြစ်ရန် အတွက် ကတော့ Serial key ထည့်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။
လေ့ကျင့်ချင်တဲ့ သူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
ကဏ္ဍ Computer, Keyboard
Keyboard Color Theme Version : 1.1 Apk (All Android)
Keyboard Color ဒီဇိုင်း ဆန်းဆန်း လေးတွေ ကြိုက်သူတွေ အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ install လုပ်
ရလွယ်ကူ ပါတယ်။ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ စာမျက်နှာ ကနေ မိမိ ကြိုက်ရာကို “Set as Active
Theme" နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Android : 2.2 နှင့် အထက်ကစပြီး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
Play Store Link: Keyboard Color
Form: ဘလော့ခရီးသည် by ရန်ကုန်သား
ကဏ္ဍ Android, Keyboard, Phone Application, Theme
Hot Virtual Keyboard 8.1.5.0 Final + Keys
မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ Keyboard မကောင်းသူတွေ အတွက် On-Screen Keyboard လေးကို တင်ပေးလိုက်
ပါတယ်။ Final Version လေး ထွက် လာလို့ Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Key ကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားပါ
Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC တို့မှာ လည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
အင်စတောလုပ်နည်းကိုဒေါင်း လော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ဖတ်ပါ။
Replace Windows On-Screen Keyboard with Hot Virtual Keyboard and start typing likeapro in just minutes! Hot Virtual Keyboard packsanumber of advanced features to make on-screen typing faster, easier and more accurate. Make full use of your touch-screen PC (Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor, Kiosk) or type withamouse quickly and efficiently!!
Homepage - http://hot-virtual-keyboard.com/
Flowers Keyboard Version : 1.0 Apk (All Android)
Flowers Keyboard လန်းလန်းလေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကို ရွေးချယ်
Android : 2.2 နှင့် အထက်က စပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Flowers Keyboard for people who love flowers and want to use custom keyboards. Flowers Keyboard is the best keyboard if you like girly keyboards or flowers in life in general.
Flowers keyboard isacomplete keyboard by itself and does not require any other third party software. Flowers keyboard is the most cute keyboard and lovely keyboard your find anywhere. Flowers keyboard has the following Features:
1. Flower keyboard is Designed for tablet support including7inch and 10 inch tablets.
2. Dictionary Support: Flower keyboard has built in support for dictionary and support English dictionary.
3. Feedback: Flower keyboard has visual, physical and audio feedback on key press.
Flower Keyboard isacomplete complete. If you love roses or jasmines or any flowers, Flower Keyboard is the one for you. For people who love flowers this flowers theme brings color to their life.
Add color to your life with flowers and flowers theme.
Play Store Link: Flowers Keyboard
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 02, 2014 No comments: